यसकारण कारण युवाहरु लिभिङ रिलेशनसिपमा बस्न मन पराउँछन्...
आधुनिक जीवनशैलीमा लिभिङ रिलेशनसिपमा बस्ने ट्रेन्ड बढेर गएको छ । लिभिङ टुगेदर पनि भनिने यस ट्रेन्डमा युवा जोडीहरु विवाह नगरिकनै अथवा बिना कुनै सम्बन्ध एकअर्का सँग एकै छानोमुनिसँगै बस्ने गर्छन् ।
नेपालमा पनि केहीवर्ष यता यस्तो ट्रेन्ड विस्तारै बढ्दै गएको छ । पाश्चात्य मुलुकहरुमा यसलाई सामान्य मानिने भए पनि हाम्रो समाजमा भने यसलाई राम्रो नजरले हेरिँदैन ।
सामान्यतया केटीहरु भन्दा धेरै केटाहरु लिभिङ रिलेशनसिपमा बस्न मन पराँउछन् । धेरैले केटाहरु शारीरिक सम्बन्ध राख्नको लागि केटीसँग लिभङ रिलेसनसिपमा बस्न चाहन्छन् भन्ने सोच्ने गर्छन् ।
तर, यसको पछाडि अरु पनि धेरै कारण हुन सक्छन् । यस्ता छन् केटाहरु लिभङ रिलेशनसिपमा बस्न चाहने मुख्य ५ कारणहरुः
१. लिभिङ रिलेशनसिपमा बस्नाले उनीहरुलाई आफ्नो पार्टनरको राम्रो र नराम्रो बानीहरुको बारेमा थाहा हुन्छ । जसबाट भविष्यमा कुनै पनि समस्याको सामना गर्नुपर्दैन ।
२. लिभिङ रिलेसनसिपमा बस्नाले उनीहरु आफ्नो पार्टनरको साथमा समय बिताउन पाँउछन् । उनीहरु आफुलाई मन लागेको बेलामा पार्टनरको साथमा घुम्न जान सक्छन् ।
३. केटाहरु आफ्नो मनको कुरा सकेसम्म कसैसँग सेयर गर्दैनन् तर लिभिङ रिलेशनसिपमा बसेका केटाहरु आफ्नो पार्टनरको साथमा हरेक कुरा बिना कुनै झन्झट भन्न सक्छन् । यस्तोमा पार्टनरको साथमा भएमा उनीहरुले पार्टनरसँग सुख दुःख सेयर गर्न सक्छन् ।
४. केटाहरु पनि चाहन्छन् कि उनीहरुलाई गर्लफ्रेन्डले विनाकारण यति धेरै माया गरोस तर,उनीहरु यो कुरा खुलेर भन्न सक्दैनन् । लिभिङ रिलेशनमा बसेपछि त्यस्तो अप्ठ्यारो हट्छ । त्यस्तै साथै रहेमा केटाहरुलाई जिम्मेवारीको महसुस हुन्छ ।
५. लिभिङ रिलेशनसिपमा रहनाले तपाईंको विवाहपछिको जिन्दगी कस्तो हुनेछ त्यसको बारेमा अन्दाज गर्न सकिन्छ ।